ချောင်းဆိုးရည်နှင့်အရက် - သင်ချောင်းဆိုးနေသောဆီးရည်ကိုသောက်လျှင်သောက်နိုင်သလော။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား နှိပ်ပါ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုန်ပစ္စည်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> သင်ကချောင်းဆိုးရောဂါကိုသောက်နေရင်အရက်မသောက်နိုင်ပါလား။
ချောင်းဆိုးခြင်းသည်သေးငယ်သောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းမှပြင်းထန်သောစိတ်သောကရောက်ခြင်းအထိဖြစ်စေ၊ ညဉ့်လုံး၏နာရီ ။ သင်တစ် ဦး ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့နှင့်အတူအအေးတဲ့အခါ ချောင်းဆိုး , သင်အနေဖြင့်အဝေးထိန်း (OTC) ချောင်းဆိုးရည်တစ်ပုလင်းကိုသွားနိုင်သည်။ သင့်ရောဂါအကြောင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်သင်တွေ့ခဲ့လျှင်သူသို့မဟုတ်သူမသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောချောင်းဆိုးရောဂါအတွက်ကြိုတင်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
အကယ်၍ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွင်ညစာနှင့်ဘီယာသောက်ရန်ဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်သောက်ချင်လျှင်ကော။ သင်ချောင်းဆိုးရည်နှင့်အရက်ရောမလား?
ကံမကောင်းစွာပဲ အရက်နှင့်ချောင်းဆိုးရည်မရောနှောပါနှင့်။ ချောင်းဆိုးသည့်ရည်နှင့်အရက်ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကမူးဝြေခင်းနှင့်မူးဝြေခင်းတိုးပွားစေပြီးသင်၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကားမောင်းခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ချောင်းဆိုးသောဆေးများတွင်အရက်လည်းပါ ၀ င်သောကြောင့်ဆိုးကျိုးများပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့်အရက်တို့အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ပထမ ဦး စွာအသုံးများသော over-the-counter (OTC) နှင့်ဆေးညွှန်းအချို့ကိုဖြိုချပါစို့ ဆေးဝါးချောင်းဆိုးခြင်း နှင့်ချောင်းဆိုးသက်သာရာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ။
Robitussin DM , Tussin DM (guaifenesin, ခန့်မှန်းသူနှင့် dextromethorphan, ချောင်းဆိုးနှိမ်နင်းခြင်းပါရှိသည်)
Delsym (dextromethorphan ပါရှိသည်)
NyQuil ရည် (အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ dextromethorphan ပါရှိသည်)
DayQuil ရည် (အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ dextromethorphan ပါရှိသည်)
Mucinex-DM အရည် (guaifenesin နှင့် dextromethorphan ပါရှိသည်)
မှတ်ချက်။ ။ ဆေးပြားသို့မဟုတ်ရည်ပုံစံဖြင့်အခြားသောချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးခံခြင်းများတွင် dextromethorphan များပါ ၀ င်သည် NyQuil Liquicaps, DayQuil Liquicaps, Robitussin ချောင်းဆိုးဂျယ်လ်, နှင့် Mucinex-DM ဆေးပြားများ ။
Phenergan DM (promethazine နှင့် dextromethorphan ပါ ၀ င်သည်)
codeine နှင့်အတူ Phenergan (Promethazine နှင့် codeine ပါ ၀ င်သည်)
Robitussin AC (guaifenesin နှင့် codeine ပါရှိသည်)
မြဝတီ (chlorpheniramine နှင့် hydrocodone များပါဝင်သည်)
အပေါ်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်အသုံးများသောအရာများဖြစ်သည် dextromethorphan နှင့် codeine ။
သင် dextromethorphan နှင့်အရက်ရောမလား?
အကယ်၍ သင်သည် OTC သို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းဆိုင်ရာချောင်းဆိုးဆေးကိုသောက်ပါက dextromethorphan ပါသည့်ချောင်းဆိုးဆေး - သင် Robitussin-DM နှင့်အရက်ကိုရောစပ်နိုင်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သို့မဟုတ် Delsym နှင့်အရက်? သို့မဟုတ် dextromethorphan အရက်ပါသောအခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုခုလား။
Nope ။ dextromethorphan OTC ပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုသင်အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်သော်လည်းအရက်နှင့်ရောသောအခါဤဆေးဝါးများသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ကောင်းပြီ, dextromethorphan နှင့်အရက်နှစ်မျိုးလုံးသည်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) စိတ်ကျရောဂါဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အပန်းဖြေခြင်း၊ အိပ်ချင်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်စရာခံစားမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Dextromethorphan သည်အလွန်အကျွံအလွဲသုံးစားလုပ်သောဆေးဖြစ်သည်။ dextromethorphan နှင့်အရက်တို့ကိုရောနှောခြင်းသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေပြီး၎င်းသည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ -
မှတ်ဥာဏ်နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သော ဦး နှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်
Guaifenesin သည်ချွဲလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။ လူအများစုကဒီဆေးကိုသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကချောင်းဆိုးရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပေးတယ်။ Guaifenesin ကို OTC ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Mucinex (သို့) ရိုးရိုး Robitussin (Mucinex-DM သို့မဟုတ် Robitussin-DM မတူပါ။ DM သည်ဤထုတ်ကုန်များတွင် dextromethorphan ကိုဆိုလိုသည်) တွင်တွေ့ရသည်။ Codeine ပါ ၀ င်သည့် Robitussin ကဲ့သို့သောဆေးညွန်းထုတ်ကုန်များတွင် guaifenesin လည်းပါဝင်သည်။
guaifenesin သည်နည်းပညာအရအရက်နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသော်လည်းဖျားနာနေစဉ်အရက်ကိုကျော်သွားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ အရက်သည်ရောဂါ၏လက္ခဏာများ (နှင့်သင်၏ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ) ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ အရက်သည်သင့်ကိုအားလျော့စေပြီးသင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းစေနိုင်သည်။
သင် codeine ချောင်းဆိုးရည်နှင့်အရက်ရောမလား?
သင်၏ချောင်းဆိုးခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သဖြင့်သင်သည် OTC အတန်းကိုကျော်ပြီးဟိုက်ဒရိုကိုဒွန် (သို့) ကုဒ်ဒင်းပါ ၀ င်သောချောင်းဆိုးဆေးရည်ကိုဆရာဝန်ထံပြသခဲ့သည်။ သင် hydrocodone သို့မဟုတ် codeine ချောင်းဆိုးရည်နှင့်အရက်ရောမလား?
ထိုကဲ့သို့သော hydrocodone သို့မဟုတ် codeine အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဆေးဝါးများပါဝင်သည် အနက်ရောင်သေတ္တာသတိပေးချက် ဤသည်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) မှလိုအပ်သောအကြီးမားဆုံးသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆေးများသည်အလားအလာကောင်းများရှိသည် အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်သေခြင်းသို့ ဦး တည်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ယူသောအခါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများပါရှိသည်ချောင်းဆိုးရည်ဖြစ်ကြသည် ထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများ အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များထက်ကျော်လွန်သောဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသောလူကြီးများကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယူသောအခါ၎င်း codeine ပါ ၀ င်သည့်ချောင်းဆိုးရည်များသည်ပြင်းထန်သော၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျဝေဒနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အခုတော့အရက်ထည့်ပါ။ ဒါကကြီးမားတဲ့အဘယ်သူမျှမပါပဲ။ ဤချောင်းဆိုးခြင်း၏ထုတ်လုပ်သူများက (အနက်ရောင်သေတ္တာမှတ်တွင်လည်း) Codeine သို့မဟုတ် hydrocodone ကဲ့သို့သောအရက်နှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသက်သာခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မေ့မြောခြင်းနှင့်သေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသတိပေးသည်။ Hydrocodone သို့မဟုတ် codeine ပါဝင်သောချောင်းဆိုးရည်နှင့်အရက်သည်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဆေးနှင့်ညီမျှသည်။
ထို့အပြင်အချို့သော OTC နှင့်ဆေးညွှန်းချောင်းဆိုးဆေးများသည်သူတို့၏ချောင်းဆိုးခြင်းနှိမ်နင်းသောအရာများအပြင်အရက်အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သည်ဆေးဝါး၏သက်ရောက်မှုများအားအရက်နှင့်အခြားအရက်များနှင့်ပေါင်းစပ်နေလိမ့်မည်။
ဒီဇယား နယူးယောက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းကဖန်တီးထားသည့်အရက်နှင့်အရက်မပါသည့်ဆေးများပါ ၀ င်သည်။
အရက်ပါသောများသောအားဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အရက်ပါသောအချို့သောညများတွင်နိုက်ကွူ၊ ဇာဇူးကွိုင်နှင့်အခြားညအချိန်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးရည်များပါ ၀ င်သည်။
ပိုကောင်းသေးသည်, အရက် - အခမဲ့ဖော်မြူလာကိုရွေးချယ်ပါ။ ဆေးဆိုင်အများစုတွင်အရက်မပါသောအရက်ကင်းသည့်ချောင်းဆိုးရည်အမျိုးအစားများပါရှိသည် Tussin-DM ဒါမှမဟုတ် Safe-Tussin DM ။ သင်သည်သင်၏ဖန်ခွက်ထဲမှာအရက်ကိုရှောင်ရှားလိုလျှင် နှင့် သင်၏ဆေးဝါးများသည်ဤရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖော်မြူလာများသည်နှစ်များတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်အပြင်ထုတ်ကုန်တွင်အရက်မရှိကြောင်းသေချာစေရန် OTC ချောင်းဆိုးဆေးကိုရွေးချယ်သည့်အခါသင်၏ဆေးဝါးနှင့်အတူတံဆိပ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
သတင်းဆိုး သငျသညျပိုကောင်းခံစားရသည်အထိရက်အနည်းငယ်အရက်ရှောင်ကြဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးဆေးနှင့်အရက်အများစုသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ အချို့သောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများသည်သေစေနိုင်သည်။
သတင်းကောင်း သင်ဖျားနာနေချိန်တွင်သင်မသောက်လျှင်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ အရက်သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ဖျားနာသောအခါသင်၏ z ကိုလိုအပ်သည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုပင်ထိခိုက်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသင့်ချောင်းဆိုးဆေးကိုသောက်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်အရက်သောက်လိမ့်မည်ကိုသင်သိပါကသင်၏ချောင်းဆိုးမှုကိုကုသရန်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်နည်းလမ်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ပျားရည်တစ်ဇွန်း၊ ဆေးမသောက်ရသည့်ချောင်းဆိုးအချို့ကျဆင်းခြင်း၊ က စိုထိုင်းမှုထိန်းစက် သို့မဟုတ်အငွေ့ပျံနှင့်အရည်များများရုံလုပ်လိမ့်မယ်။
သငျသညျနာမကျန်းကနေပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ချောင်းဆိုးရည်ကိုယူပြီးတဲ့အခါ, အရက်ကိုကျော်သွားပါ။ သငျသညျပိုကောင်းခံစားရသည့်အခါဆင်နွှဲရန်အချိန်အများကြီးရှိသည်လိမ့်မယ်။
beta blockers များသည်စိုးရိမ်စိတ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
planbကိုသောက်ပြီးနောက်ဘယ်လောက်ကြာထိရောက်မှုရှိလဲ
ambien (zolpidem) သည်စိုးရိမ်သောကကိုကုသရန်အသုံးပြုသောနာမည်ကြီး benzodiazepine ဖြစ်သည်။